Mmehie 10 kacha elu Marijuana na azụmaahịa CBD na-eji njikarịcha njin ọchụchọ
Ihe nhiehie 10 kacha elu nke wii wii na-eme ka ha webụsaịtị ha.
Ihe 10 mejọrọ wii wii na-eme egwuregwu mistakes
Adịghị achọpụta na saịtị ahụ bụ mkpanaaka enyi
Ihe dị ka pasent 75 nke ndị na-enyocha ịntanetị na-eme site na ngwaọrụ mkpanaka. Nke a bụ eziokwu karịa maka azụmaahịa nwere adreesị anụ ahụ n'ihi na ọtụtụ oge ndị ahịa a nwere ike ịgafe. Google malitere mgbanwe a na 2014 mgbe ọ chọpụtara na nyocha ekwentị na-ekpuchi nchọta desktọọpụ maka oge mbụ. Google ga- MMEJỌ gị na saịtị ma ọ bụrụ na ọ bụghị mobile enyi na enyi. Nwere ike nwalee weebụsaịtị gị ugbu a site na njikọ mmekọrịta enyi na Google Ebe a: https://search.google.com/test/mobile-friendly
Enweghị ngwaahịa nchịkọta ngwaahịa na weebụsaịtị ha.
Ọtụtụ ụlọ ọgwụ Marijuana na-atụrụ ndụ na-ewepụta menu ha na saịtị ndị ọzọ dịka Leafly ma ọ bụ Weed-Maps. Nke a bụ nnukwu ndudue maka ihe ndị a:
A.Google search engines na-ahọrọ weebụsaịtị nke na-emelite ọdịnaya ha ugboro ugboro. Ọtụtụ mgbe a na-emelite saịtị na-emewanye ugboro ugboro site na Google crawlers.
B.Ọdịnaya bụ Eze, webụsaịtị nwere ọtụtụ ọdịnaya ga-adị elu mgbe niile karịa ndị nwere obere.
C. Nke gi ụba ọnụego ga-aka elu Ọnụego bounce bụ okwu SEO nke na-atụle oge ole ndị ọrụ nọrọ na weebụsaịtị gị. Ọ bụrụ na ị na wii wii Google na ọ na-ewetara gị na ebe nrụọrụ weebụ na-ere akụkụ ụgbọ ala ị pịa ozugbo ma gaa n'ihu na ọchụchọ gị. Google na-ele metric a anya dị ka ihe ịrịba ama na ebe nrụọrụ weebụ gị bụ spammy ma ọ bụ dị ala. Ndi mmadu chotara ihe ha choro noro na saịtị ahu ogologo oge ma guo ihe omuma a.
D.Ọ bụrụ na nchịkọta nhọrọ gị adịghị na ndị ahịa saịtị gị ndị na-achọ ngwaahịa ụfọdụ ga-agakwuru ndị asọmpi gị. Lee otu ihe atụ,
Ndị ọrụ Nchọgharị maka Nrọ Blue na Tacoma nke a bụ nsonaazụ.
Ulo oru wii wii na-enweghi menu ha na weebụsaịtị ha DỊGHỊ gosipụta ndị nyocha mpaghara a.
Emeghi isiokwu nyocha tupu ị wuo saịtị ahụ.
Ọ bụrụ na ịmeghị nchọpụta isiokwu nke bụ usoro iji ụfọdụ ngwaọrụ iji chọpụta ihe isiokwu ndị mmadụ na-achọ kachasị, ị ga-enweta obere ahịa na ahịa karịa ndị na-asọmpi gị. Easyzọ dị mfe iji mee nyocha isiokwu bụ iji pịnye okwu gị na Google. Na akpaaka zuru ezu ntụnye dị mma maka ụdị okwu ndị ahịa na-eji achọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. Ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị enweghị mkpụrụokwu ndị a na aha, nkọwa Meta na ahụ nke ibe gị ị na-efu ọtụtụ ndị ahịa.
Blog gị na-arụ ọrụ ndị a:
A. Ọ na-agbakwunye ọdịnaya na weebụsaịtị gị. Nwere ike tinye nyocha ngwaahịa, akụkọ, ihe omume na ndị ọzọ.
B. Ọ na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ gị dị ọhụrụ na ọdịnaya ọhụrụ nke ga - enye gị ọkwa dị elu.
C. You ga - ejide okwu ọdụ ogologo nke bụ pasent 75 nke ọchụchọ niile. A obere ọdụ isiokwu ga-abụ ihe dị ka "dispensaries m nso" a ogologo ọdụ isiokwu ga-abụ "Gịnị bụ ihe kasị mma ntụrụndụ wii wii dispensary na Seattle". Chetakwa na pasent 25 nke ọchụchọ otu ụbọchị bụ nke Google na-ahụtụbeghị mbụ. Site na ịtinye blog ma debe ya ka emelitere ya na ọdịnaya dị ukwuu ị ga - ejide ọtụtụ ndị ahịa a.
Vital X Dispensary Indoor / N'èzí WIFI Igwefoto
199.99 na ire ere maka 119.00
Chọghị ịdepụta azụmaahịa Google na ibe Google-Plus.
Google na-anwa ịsọmpi na saịtị ndị ọzọ na nyocha dịka Face book na Yelp. Site na ịmecha ndepụta azụmahịa Google gị na ịgbakwunye foto dị mkpa Google ga-enwe ike iji azụmahịa gị kpọrọ ihe ma depụta ya elu. Ọzọkwa site na imelite peeji nke Google gbakwunyere na ịgba ndị ahịa gị ume ịgbaso ibe gị. Ozi gị ga-egosi na nsonaazụ ọchụchọ ha n'otu ntabi anya.
Adịghị ere ahịa site na You-tube
Google bu igwe nyocha kachasi n ’uwa, ihe otutu ndi mmadu amataghi bu na You-Tube bu ihe nyocha nke abuo n’uwa n’uwa. Ma maa gịnị? Google nwere--tube. Google hụrụ vidiyo vidio You-Tube n'ihi na ha nwere ike ree mgbasa ozi mgbe ọ bụla ndị ọrụ lere ha anya. Ya mere, ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ịnweta Channel You-tube maka azụmaahịa gị yana ịdebe isiokwu vidio bara ọgaranya metụtara azụmahịa gị.
Anaghị anakọta ozi ịntanetị nke ndị ahịa
Ebe nrụọrụ weebụ gị site na ụbọchị otu kwesịrị ịnwe ngalaba ebe ndị ahịa nwere ike ịhapụ aha ha na adreesị ozi-e iji sonyere listi nzipu ozi gị. Nwere ike iji ndepụta nzipu ozi a iji kpọsaa ihe omume, ego na asọmpi maka pennies na dollar.
Requchọghị ndị mgbere iji tinye na saịtị gị.
Otu ụzọ dị mkpa Google si ekpebi ike weebụsaịtị bụ site na ọtụtụ weebụsaịtị ndị ọzọ na-egosi njikọ gị. Nke a dị ka ntuli aka ntaneti na weebụsaịtị gi bu ezigbo ahia ma nwee ezigbo ọdịnaya. Agbanyeghị njikọ niile ahaghị nhata; ị chọrọ njikọ sitere na weebụsaịtị ndị dị na otu ụdị azụmahịa ị nọ na ya. Ole ndị na-ere gị nwere ebe nrụọrụ weebụ? Mee ka ha niile tụọ njikọ gị na saịtị ahụ. Nke a ga - enyere gị aka BOT Ulo oru di elu karie gi ahia.
Enweghị ndị ọrụ itinye aka na ọdịnaya na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Olee otú ọtụtụ ndị ọrụ gị nwere Face-akwụkwọ, twitter ma ọ bụ akaụntụ Google? Ha na-eziga ma na-ekekọrịta post blọgụ gị? Ha na-ahapụ ihe ndị na-ekwu na weebụsaịtị gị? Ha na-ekepụta ọdịnaya omenala na ederede banyere azụmaahịa gị? Ọ bụrụ na ha abụghị, ha kwesịrị. Ndị ọzọ na-elekọta mmadụ na-akọrọ azụmahịa gị ka elu gị na ebe nrụọrụ weebụ ga-ọkwa. Ihe ịga nke ọma ha dabere na ihe ịga nke ọma gị.
Guo ndu anyi Wayszọ 8 ndị ọrụ nwere ike inyere aka melite njikarịcha njin ọchụchọ gị.
Na-azaghị nyocha Google gị.
Dika nyocha emere Brightlocal 88% nke ndị ahịa tụkwasịrị obi nyocha na ntanetị dịka nkwanye onwe onye-nke bụ ihe ịtụnanya mgbe ịlele n'eziokwu na ndị na-amaghị na ha na-eziga nyocha. Otu nnyocha ahụ nke Brightlocal mere; kpebisiri ike na ọ bụ naanị 12% nke ndị bi anaghị agụ nyocha nke ọrụ azụmahịa ma ọ bụ ngwaahịa. Otutu ndi nwere ahia amaghi na ha nwere ike izaghachi nyocha ha, nke a bu uru gi ma oburu n’eji ya. Google na agba ndi nwere ahia ume ka ha zaghachi ezigbo nyocha na ihe kariri ihe ojoo. Nke a na-egosi Google na Ahịa na ị na-eche banyere gị online aha. Google na-elekwa nke a anya dị ka ihe mgbaàmà na azụmahịa gị ziri ezi ma bulie gị elu.
Gaa ebe a iji mụta otu esi azaghachi nyocha Google gị. https://support.google.com/business/answer/3474050?hl=en
Ihe Nleghachi nke Nzaghachi Ndị Ahịa
Dispensary Search Engine njikarịcha bụ otu n’ime ihe ndị kachasị mkpa ị nwere ike ime iji weta ndị ahịa ndị ọzọ. Ọ bụrụ na azụmahịa gị abụghị na peeji mbụ nke Google ndị ahịa ahụ na-aga ndị na-asọmpi gị.
Isenselogic.com bụ nke David Meshach bụbu onye injinia nchekwa data Microsoft na onye nwe ikikere ọgwụ wii wii. Anyị maara otu o siri sie ike ịsọ asọ na ahịa wii wii na egwuregwu. Site n'ịhụ na weebụsaịtị gị enweghị njehie ma wepụta nke ọma na ị ga-awụli elu na asọmpi gị.
Kpọtụrụ anyị taa maka a AKW SEOKWỌ SEO n'efu nke weebụsaịtị gi ugbu a ma obu zaa ajuju obula i nwere ike inwe gbasara webusaiti gi.
Pịa ebe a Dejupụta kọntaktị anyị
Banyere chepụtara: codecafe
PreviousPrevious post:Ego ole Leafly & Weedmaps na-akwụ iji kpọsaa na 2019?OsoteNext post:Wayszọ 8 ndị ọrụ gị nwere ike inyere azụmahịa gị aka inweta ego site na SEO
seo ịkpọtụrụ ekwu, sị:
July 1, 2020 na 9: 06 pm
Enwere m mmasị na blog a! M na-enyocha ebe nrụọrụ weebụ gị n'ụzọ ziri ezi
ọtụtụ yana ị na-ewepụta ihe ụfọdụ dị oke egwu oge niile.
M kesara nke a na Facebook m maka ebe a na-ere akwụkwọ maka ị cannabisụ ọgwụ ọ andụ na ndị egwuregwu m masịrị
ya! Nọgide na-enwe ezi ọrụ 🙂
Uchendu ekwu, sị:
July 2, 2020 na 2: 26 pm
Arningzọ nyocha site n'iji wii wii wii ihe ntụrụndụ na-eji njikarịcha nyocha
Mgbe naanị ụbọchị iri atọ gachara, m ka kwesịrị ịtụrụ onwe m ọnụ iji hụ na anaghị m arọ nrọ.
A na-akwụ m ọtụtụ iri puku dọla kwa ọnwa na mgbidi anọ m nwere.
Uru na-eto ma na-eto eto!
Ọ na-ewe naanị nkeji ole na ole
Naanị ịpị aka ole na ole, ị nwere ike iwepụta $ 15,000 kwa ụbọchị maka ndụ gị niile
Nkasi Obi nke uwa CBD ekwu, sị:
August 8, 2020 na 12: 11 am
Nnukwu edemede dispensary webụsaịtị na SEO.
ọdịdị doro anyaDee okwu